Kodzero-dzevanhu, 05 Chikumi 2017
Muvhuro 5 Chikumi 2017
Chikumi 05, 2017
VaMangudya Vanoti ZimDollar Hairisi Kuzodzoka Kudzamara Zvinhu Zvagadzikana
Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya, vanoti dhora remunyika harisi kuzodzoka nechimbi chimbi nekuti hupfumi hwenyika hausati hwagadzikana.
Mapato Anopikisa Oshora Rwendo rwaVaMugabe kuMusangano weMakungwa weUN
Mapato anopikisa hurumende pamwe neveruzhinji vashora mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nekuenda kumusangano weUnited Nations uri kutarisa zvinoitika mumakungwa.
Homwe Inobatsira Vanotenga Zvinhu Kunze kweNyika Inoparurwa muChinhoyi
Vachitaura muChinhoyi mukuru weCross Border Association, Muzvari Fari Chademana, vati chirongwa ichi chichayamura vanotengesa kuti vakwanise kuwana mari yekuAmerica kuti vanotenga zvinhu kune dzimwe nyika.
Vagari Vofarira Kuvandudzwa kweMabvuku Clinic Kuve Chipatara
Kirinika iyi isati yave chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals.
ZEC Yoshorwa neKupa Kwayo Basa reMichina yeBVR kuLaxton yekuChina
Asi izvi zviri kushorwa zvikuru nemapato anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo, avo vanoti kudyidzana kweChina neZimbabwe kunogona kunge kuine chekuita nedanho iri.
Chikumi 04, 2017
Shirikadzi neVakweguri Vobatsirikana neSizinda Community Garden Project
Ambuya Judith Dube, avo vane makore makumi matanhatu nerimwe ekuberekwa, vanogara mumusha weSizinda nemurume wavo, pamwe chete nevana vavo vakura vaviri, uye vazukuru vatanhatu.
Chikumi 02, 2017
VaNaison Ndlovu Voradzikwa kuHeroes Acre neMugovera
VaMudenda vati VaNdlovu vaive mutungamiri akanaka aizvininipisa nguva dzose achiyeuka kuti hutungamiri hunobva kuvanhu, vakatiwo zvakakosha kuti vatungamiri vose vagare vachirangarira izvi.
VaMugabe Vanotanga Chirongwa Chekusangana neChidiki Vachishora Zvikwata Zviri MUbato Ravo
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vaita musangano nevechidiki kuMarondera mudunhu reMashonaland East pavatsoropodza nyaya yezvikwata zvikwata zviri mubato ravo vachiti izvi zvauraya bato ravo reZanu PF.
Ambassador Thomas Vorumbidza Chirongwa cheYALI
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jnr, vanoti vanofara chose nezviri kuitwa vechidiki vakapinda muchirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti YALI kubvira pachakatanga muna 2014.
Vagari Voronga Kuratidzira kuKanzuru yeHarare
Vamwe vagari vemuguta reHarare vanonzi vari kuronga kuratidzira nemusi weMuvhuro vachinyunyuta nekuramba kuri kuita kambani yakapiwa basa rekutevera zvikwereti nekanzuru, yeWellcash, ichiri pamahofisi ekanzuru.
Mamwe Madzimai Oenda kuZambia Kunotengesa Miviri Yavo
Madzimai akawanda vari kuenda kuZambia kunoita basa rekurarama nekuita zvepabonde vachiti kuoma kwehupenyu munyika ndizvo zviri kuvatuma kuita zvepabonde vachibhadharisa.
Nguva Dzodyana Mitemo yeSarudzo Isina Kuvandudzwa
Kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko pamitemo yesarudzo, sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa, bumbiro renyika rinopa mvumo yekuti sarudzo idzi dziitwe mutemo uyu usina kusandurwa.